युवा नेतालाई समय उपहार «
युवा नेतालाई समय उपहार
प्रकाशित मिति : 15 September, 2019 9:03 pm
पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै विश्व समाजको विकास भयो । समाज विकास हुनु समयको गतिशितलताको परिणाम थियो । चेतनाको विकाससँगै विश्व धेरै राष्ट्रहरुमा विभाजन भए । गतिशिल समय संसारभरको एउटै थियो, अहिले पनि छ र भोली पनि हुनेछ ।
विश्वभर समय एउटै रफ्तारमा हुईंकीरहेको छ । तर यही समयलाई सदुपयोग गर्दै विश्वका विकसित राष्ट्रहरु चीन, अमेरिका, रसिया लगायत वेलायत भए । तर त्यही समयसँगै नेपाल अझै पनि अल्विकसित मुलुक नै रहेको छ । विश्को ९० प्रतिशत भन्दा बढी राष्ट्रहरु उपनिवेश भए तर ती राष्ट्रहरु समेत विकसित भइसके । विश्वमा उपनिवेश नभएको जम्मा राष्ट्रहरु १४ वटा मध्ये नेपाल पनि १ हो । तर नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भएर पनि विकास हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा मुल कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । साथै नेपाली राजनीतिक नेतृत्वहरुले समयलाई ख्याल नगर्दा नेपाली जनताहरु संधै गरिब र अल्पविकसित मुलुक हुनु पर्यो । यो ज्याँदै विडम्बनाको कुरा हो । तर अब बर्तमान नेपाली राजनीतिक अवस्था स्थिरता तिर लम्किरहेको छ ।
नेपालका धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भइ अगाडी बढीरहेको अवस्था छ । सोही संस्थाको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको संयोजक रामप्रसाद सापकोटा (क. दीशिखा) हुनु भएको छ । अहिलेको नेपालको कुलजनसंख्याको ४० प्रतिशत युवा मध्येको ७० प्रतिशत कम्युनिष्ट पार्टीको युवाहरुको नेतृत्व क. दीपशिखाले हाँक्दै हुनुहुन्छ । यसकारण उहाँले अबको नेपालको राजनीतिलाई विश्व राजनीतिसँग प्रतिष्पर्दा गर्ने हैसियतले उच्च छलाङ मार्न समयको सही रुपमा सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसै यर्थाथतालाई आंकलन गर्दै साविक वाईसियल नेपाल प्रदेश नम्बर १ को तर्फबाट मायाको चिनो तथा उपहार स्वरुप समय घडी साविक वाईसियल केन्द्रिय सचिव तथा प्रदेश १ इन्चार्ज पुर्ण बहादुर भुजेल ‘चिन्तन’ ले प्रदान गर्नु भयो ।
उक्त कार्यक्रममा साविक वाईसियल महासचिव सुवोध सेर्पाली, सचिवहरु गणेश शाही, रतन शाही लगायत केन्द्रि समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आसा गरौं अबको नेपाली राजनीतिले समयको गतिसँगै नेपाली जनताहरुमा राज्यले उद्घोष गरेको सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल निर्माणमा छलाङ मार्नेछ ।